Fampianarana sy Fanadinana Tsy misy fanazavana, tsy hita ny minisitra…
Sahiran-tsaina amin` ny fandefasana ny zanany any an-tsekoly ny ankamaroan` ny ny ray amn-dreny. Mitaintaina izy ireo mahakasika ny zanany hoe hanao ahoana ny ho fahaizan` ny zanany vokatry ny fampiatoana ny fampianarana matetika.
Mpiasan’ny sekoly tsy miankina Misy efa ho 5 volana no tsy nandray karama
Velon-taraina koa ireo mpanabe sy mpampianatra amin’ireo sekoly tsy miankina, indrindra, ireo antsoina mahazatra hoe “chargé de cours” satria ny ora hiasany ihany no hanomezana vola azy ,
Fanadinam-panjakana Amin` ny 01 septambra ny CEPE…
Betsaka ny ray aman-dreny sahiran-tsaina ka nila vaovao marim-pototra momba ny tetiandron` ny fanadinana ofisialy ny fanjakana.
Fampianarana Amin` ny 2023 vao tena hilamina ?
Tamin` ny faha-19 n` ny volana martsa teo no tsy nianatra ny mpianatra amin` ny ankapoebany. Ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana ihany no niverina an-tsekoly ny volana mey lasa teo.
Vakinankaratra Mitsahatra avokoa ny fampianarana amin'ny endriny rehetra
« Mitsahatra avokoa ny fampianarana amin'ny endriny rehetra, na ireo ankizy hanala fanadinana na ireo "classes intermédiaires".
Efa nanomboka tamin’ny Alatsinainy lasa teo kosa izany hoe : efa herinandro anio ny fanomanana ny laza adina BEPC raha eo am-pijerena ireo mpampianatra hanao ny fitokana-monina amin’ny fandrafetana ny laza adina Bakalorea kosa ny Ministera tompon’andraikitra ankehitriny. Ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena sisa no mbola vato misakana araka izany. Nambaran’ny profesora Assoumacou fa miankina betsaka amin’ny fihibohana ny an’ireo mpianatra any amin’ireo faritra ahitana ny tsimok’aretina COVID 19 toy ny eto amin’ny Faritra Analamanga, ny any amin’ny faritra Atsinanana….Ho an’ireo tsy nahitana ity tsomik’aretina ity kosa dia nisy ireo efa nahavita izany. Hisy indray araka izany ny atrikasa hiarahan’ity ministra ity miaraka amin’ireo mpampianatra adina ara-panatanjahantena eto amintsika hahafahana mandray fanapahan-kevitra mifandraika amin’izany. Raha tsiahivina moa dia efa nisy ny fakan-kevitra natao tamin’ireto mpampianatra EPS ireto tamin’ny volana May lasa teo.